EYH Series ezimbini Umxhubi D - China Changzhou Daming Pharmaceutical Equipment
WLDH Horizontal Iribhoni Umxhubi
EYH Series Two D Umxhubi
DSH Series Double Screw Cone Umxhubi
YPG Series Pressure Chela Dryer
Bed Fluid GFG Series High-Efficiency Dryer
Principle EYH Series ezimbini Umxhubi ntathu ibandakanya ezintathu: ivili igubu, nedawo wagalela uzimele. Igubu plane ilele phezu wagalela yokubeka, zixhaswa amavili amane kunye nenkanuko yalo yezihlunu lwenziwa amavili amabini swi. Ababini amavili amane eziqhutywa batshintshana inkqubo ngamandla ukwenza Jikelezisa njengesilinda. Le yokubeka kufika iqhutywa iseti crankshaft bar jinga leyo zixhonywe isakhelo kunye nesakhelo wakhuph ixhaswa kwi kwisakhelo. Amanqaku Kuthiwa ye EYH ezimbini di ...
EYH Series ezimbini Umxhubi ntathu ibandakanya ezintathu: ivili igubu, nedawo wagalela uzimele. Igubu plane ilele phezu wagalela yokubeka, zixhaswa amavili amane kunye nenkanuko yalo yezihlunu lwenziwa amavili amabini swi. Ababini amavili amane eziqhutywa batshintshana inkqubo ngamandla ukwenza Jikelezisa njengesilinda. Le yokubeka kufika iqhutywa iseti crankshaft bar jinga leyo zixhonywe isakhelo kunye nesakhelo wakhuph ixhaswa kwi kwisakhelo.
Isilinda ye EYH ezimbini Umxhubi ntathu nga edakasa kwicala-amabini ngaxeshanye. Elinye ukujikeleza igubu omnye wakhuph ngayo igubu kunye yokubeka kufika. Materials ukuba kuxutywe uya kujikeleziswa xa igubu sele ezijikelezayo, kwaye iya ugalelwe ekhohlo nasekunene xa akwitankana wakhuph '. Ngenxa yezi kwiziphakamiso mabini, zibonelelo zokufunda zixutywe ngokupheleleyo kwixesha elifutshane. EYH ezimbini Umxhubi ntathu ilungele ukuba axube ibe luthuthu nemilo granule izinto.
uhlobo Volume (L) Ilayisha volume (L) Ukondla ubunzima (kg) inani labantu ngokubanzi (mm) Power (kW)
A B C D M H Jikelezisa elalinamandla
Previous: DSH Series Double Screw Cone Umxhubi
Next: HJ Series double Umxhubi cone
Blade Machine Ukuxuba
Double Cone Umxhubi
Double etsobhileyo Umxhubi
Nesichumiso Powder Ukuxuba Machine
High Ephumelelayo Pharmaceutical Machine Ukuxuba
Laboratory ngerabha Ukuxuba Machine
Sokuxuba / ukuxubana injini Auxiliary
Pharmaceutical Wase Machine
Pharmaceutical Powder Ukuxuba Machine
Powder Wase Machine
Rapid Pharmaceutical Ukuxuba Machine
Irabha Wase Machine
Itanki Model Ukuxuba-Machine
D Izindululo Umxhubi Three
Wokuxova Type Umxhubi
Uhlobo wokuxova Wase Machine
CH Series slot Umxhubi
HJ Series double Umxhubi cone
SYH Series abathathu D Umxhubi
HAYI. 10, UPHUHLISO EZONE, ZHONGJIANG, ZHENGLU TOWN, BEZITHILI TIANNING, Changzhou, Jiangsu KWIPHONDO, ETSHAYINA.
Indlela ukukhetha centrifugal isomisi spray ekoreni ...